မိန်းမလျာ “ဇာတ်သွင်းခံလိုက်ရတယ်” ဆိုပါလားကွယ်… | ATK's Explicit Blog
မိန်းမလျာ “ဇာတ်သွင်းခံလိုက်ရတယ်” ဆိုပါလားကွယ်…
ကျွန်တော် မနေ့က HIV နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ ဖတ်မိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာကို သွားတွေ့ရသလဲဆိုတော့ မိန်းမလျာ မဖြစ်ချင်ဘဲ ဖြစ်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ကောင်လေး ဆယ်တန်းအောင်တဲ့နေ့မှာ အိမ်မှာ ဝင်ထွက် သွားလာနေတဲ့ ဦးလေးလို လူက စော်ကားလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တာက အဲဒီလို မိန်းမလျာ ဇာတ်သွင်းသူ မတရား ကြံတတ်တဲ့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ ရန်က ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာပါ ရေးပေးပါဆရာ။ အဲဒီဇာတ်ထဲမှာ ကောင်လေးက နောက်ပိုင်း အေပါ ကိုက်သွားတာ။
ဒါဖြင့် သည်စကား ဘယ်လိုဖြစ်လာတာတုံးလို့ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ အမှန်ကတော့ လူတင်ပါလို့ နွားကျားကိုက် တာပါ။ မူလကတည်းက အဲဒီ့ကာယကံရှင်မှာ လိင်တူချင်း တပ်မက်တဲ့ စိတ်အခံလေးက တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း ဒါမျိုးကို လူ့ဘောင်က ဝိုင်းကြဉ်ထားလေတော့ကာ သည်စိတ်ရှိတယ်လို့ ဝန်ခံဖို့ သိပ်ခက်နေတယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း အားတင်းပြီး သည်စိတ်ကို ဖျောက်ကြည့်နေတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော် ပြောနေကျအတိုင်း သည်စိတ်မျိုးက ဘယ်သန်တဲ့သူက ဘယ်သန်သလို၊ ညာသန်တဲ့သူက ညာသန်သလို သူ့ဟာသူ အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝ။ ညာဘက်ကို မနည်းလေ့ကျင့်ထားလို့သာ စာရေးတဲ့အခါ ညာဘက်နဲ့ ရေးပေမယ့် တကယ့်အရေးကျတော့ ဘယ်လက်က အရင် လှုပ်ရှားမိတတ်တာမျိုးကလား။
from → Dicussion, For Men, Q&A
← အပျို့ ရင်သား၊ အိမ်ထောင်သည့် ရင်သားနဲ့ သားသည်မအေ့ ရင်သားတွေ
ဇာတ်သိမ်းခန်း ရာဇ၀င် →
I think you are talking about homosexuality from Burmese
attitudes and perspectives. But from western perspectives
once you are willing to involve in sexual acts with another
man (even if you are active and he is passive) you are gay.
Burmese attitudes towards homosexuality is that if you act
as man and as long as you dont bend your back or put dicks
in your mouth you are man. The same attitudes as African
Americans or inmates in prisons.
In Burmese society,a‘achauk lin’ is not regarded as homo
but in western society they are gays too.
Thank you very much for the comment withaslight patronising tone or Mr. Know-All tone, sir. But let me explain to you about six different types of homosexuals that I’m aware of in “Burmese” way.
(၁) အပုန်း (passive) – လိင်တူချင်း တပ်မက်သူ ဖြစ်မှန်း လူမသိအောင် နေနေသူ။ အယူသမား။
(၂) အပွင့် (passive) – လိင်တူချင်း တပ်မက်သူဖြစ်ကြောင်း လူသိရှင်ကြားနေသူ။ သည်ထဲမှာ bisexuals (နှစ်ဖက်ချွန်) တွေ ပါနိုင်သလို transsexual (လိင်ပြောင်းထားသူ) တွေလည်း အတိအကျ ပါပါတယ်။ သူလည်း အယူသမားပဲ။
(၃) Offer (active) – အဲဒါ အဲဒါ ဆရာကြီး ပြောနေတဲ့ အခြောက်လင်ပေါ့။ သို့သော် ဆရာကြီးက အားလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး အခြောက်လို့ ပြောနေတာ။ တကယ့် မိန်းမလျာတွေက သူတို့ကို အခြောက်လို့ ခေါ်ရင် သိပ်နာတယ်ဗျ။ ပြောတဲ့ အခြောက်က တစ်မျိုး သတ်သတ် ရှိတယ်။ “မိန်းမလျာရဲ့ လင်”လို့ ခေါ်မှ မှန်မယ်။ သူက ရိုးရိုးလင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ မိန်းမလျာဆီက ငွေချူတဲ့ လင်။ သူက အပေးသမား သက်သက်။
(၄) သူငယ် (active) – သူကလည်း မိန်းမလျာလင်ပဲ။ ပိုက်ဆံမယူဘူး။ မိန်းမလျာ ဆင်တာ ၀တ်၊ ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာ စားတဲ့အဆင့်။ သူလည်း အပေးသမား သက်သက်။
(၅) နှစ်ဖက်ချွန် (both passive and active, or active only but also have sex with women, in other wordsabisexual) လိင်တူချင်း အပေးရော အယူရော ရချင် ရနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပေးသမားပဲ လုပ်တယ်။ သို့ပေမယ့် လိင်ကွဲနဲ့လည်း နေလို့ရတဲ့သူ။
(၆) အခြောက် – may or many not have any sexual interests in the same sex, but having womanly manners. နွဲ့ပြီး သိပ်နုနုလှလှ နေတတ်တဲ့သူ။ သူက လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားချင်လည်း ၀င်စားမယ်၊ မ၀င်စားချင်လည်း မ၀င်စားဘူး။ သူက တစ်တန်းတစ်စားပါ။
ကိုယ့်ဆရာကြီးက သိပ်အနောက်တိုင်း ဆန်သွားတော့ ဗမာစကားနဲ့ အားလုံးကို အခြောက်လို့ သိမ်းကြုံး ခေါ်ချင်ပုံ ရတယ်။ မိန်းမလျာလင်လည်း အခြောက်ပဲဆိုတဲ့ စကားထဲမှာ ကျွန်တော်က မိန်းမလျာလင် ခဏလောက်လုပ်ဖူးလို့ ကျွန်တော်လည်း အခြောက်ပဲလို့ စွပ်စွဲတဲ့ လေသံလေးပါနေတယ်။ ကျွန်တော့်အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ဘယ်သူ ဘာထင်ထင် သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ သေတဲ့အခါ ကျွန်တော့် လိပ်ပြာသန့်သန့်လေးနဲ့ သေသွားချင်တာပဲ ရှိပါတယ်။
အရှေ့တိုင်းတွေ အနောက်တိုင်းတွေ မကွဲပါဘူး။ လိင်တူချင်းတပ်မက်သူ (homosexual) ဆိုတာ တစ်မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရင် active ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ passive ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ သူတို့စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ ပေးဝေသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်ခံသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်တူချင်း ကြိုက်တာ ကြိုက်တာပါပဲ။
ကျွန်တော် ပြောနေတာက ကျွန်တော်လို သူတို့လင်အဖြစ်နေဖူးတဲ့သူတောင် သူတို့ကို ဘယ်လိုမှ ကြိုက်လို့ မရရင် မိန်းမလျာဇာတ်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားက အခြေအမြစ် မရှိတဲ့စကားပါ ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်စာ (အသံလွှင့်ချက်)တစ်ခုလုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ လမင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာပါ။ ဆရာကြီးက ကျွန်တော့်လက်ညှိုးကိုပဲ မဲပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျား။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဗမာလိုပဲ ပြောလိုက်ပါရစေတော့။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။ Or in your language, I must say thank you very much indeed.
homosexual နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုဖော်ပြချက် definition တွေကိုဖတ်ရတာ နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရှိလှပါပေတယ်ကိုကြီးကျော်ရယ်။ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးတဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဖြစ် လာပေတာပဲ။
၀င်ဖတ်သွားပါ တယ် ဆရာ ရယ် ။ ကျေးဇူးပါ နော် ။
လေ့လာဖတ်ရှုသွားပါတယ် ဆရာ Active နဲ့ Passive အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်။
ဘာမှ အသေးစိတ်စရာ မရှိပါ။ ရှင်းနေပါတယ်။ သေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဆရာက ပေးတဲ့ဗဟုသုတက ဘ၀တစ်သက်တာမှာ ရင်ဘတ်ထဲ အမြဲသိမ်းဆည်း ထားပါမယ်